Global Voices teny Malagasy » Japoney Maro No Gaga Fa Vitsy Ny Mpitsoa-ponenana Eken’ny Fireneny Raisina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Septambra 2015 5:22 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Voina, Vonjy Voina
Ny faravodilanitr'i Tokyo sy ny tendrombohitra Fuji. Avy amin'ny Wikimedia .
Efa an-jatony maro no nizaràna tao amin'ny haino aman-jery sosialy Joponey ilay lahatsoratra amin'ny teny Anglisy vao haingana tao amin'ny gazety Britanika The Guardian miresaka momba an'i Japana.
Tezitra ireo Japoney maro mpaneho hevitra satria araka ny voalaza ao amin'ny The Guardian  dia mikasa ny handray mpitsoa-ponenana Siriana vitsivitsy i Japana, na tsy misy.
Tsy mbola mila mpitsoa-ponenana Siriana i Japana amin'izao fotoana izao na dia manome $200.000 ho fanampiana amin'ny ady atao amin'ny ISIS aza izy
Mahamenatra ny fihetsika manokan'ireo Japoney mpisera amin'ny Twitter :
Raha toa ka lazain'ireo hafa mpisera amin'ny Twitter fa manana adidy hanampy ireo mpitsoa-ponenana i Japana:
Japana, ilay firenana izay manaiky handray mpitsoa-ponenana tena vitsy. Japana mandositra andraikitra amin'ny filazana fa [any amin'ny firenena lavitra] ny olana, nefa manaiky ny handray mpitsoa-ponenana tena vitsy izahay. Na dia alaim-panahy hilaza aza fa variana amin'ny Lalàna momba ny Fandriampahalemana sy ny Fiarovana i Japana, ary ny olona rehetra kosa manambatra ny heriny hanoherana ireo lalàna vaovao tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana, tena tsy fialantsiny mihitsy izany.
Izay rehetra manohana ny demokrasia parlemantera mifototra amin'ny lalàm-panorenana dia tsy tokony hanao tsinontsinona ny zava-tsarotra mahazo ireo mpitsoa-ponenana.
Ao amin'ny Twitter, nomarihan'i Ryuchi Sato, mpampiala voly fa :
Siriana maherin'ny 4 tapitrisa no nandao ny fireneny. Eo ho eo amin'ny 340.000 no tonga ao Eoropa. Nampanantena ny handray mpitsoa-ponenana 500.000 i Alemaina ; 24.000 i Frantsa ; 20.000 i UK ( ao anatin'ny dimy taona) ; 10.000 ny an'i Etazonia ( mandritra ny taona ho avy) ; 12.000 ny an'i Aostralia ; 20.000 ny an'i Venezoela ; nanaiky ny handray mpitsoa-ponenana ihany koa i Brezila, Arzantina, Orogoay ary ireo firenena hafa.
Mpitsoa-ponenana firy no neken'i Japana hatramin'izao ? Telo raha be indrindra.
Mahazatra ny faneken'i Japana handray mpitsoa-ponenana vitsy raha oharina amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Organisation for Economic Co-operation and Development (Fikambanana ho fiaraha-miasa ara-toekarena sy fampandrosoana). Efa voasoratra tao amin'ny gazetiboky The Economist tamin'ny Martsa 2015 fa : 
Tamin'ny taona lasa , sambany tafakatra 50.000 ny isan'ireo mpitady fialokalofana sy ireo olona nafindra toeram-ponenana ao amin'ny fireneny maneran-tany. Any Japana dia betsaka kokoa noho ny tamin'ny fotoana rehetra ny fangatahana fialokalofana hatramin'ny nanaovan'ny firenena sonia ilay fifanarahana momba ny mpitsoa-ponenana nataon'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1981.
Mpitady fialokalofana11 fotsiny tamin'ireo 5.000 nangataka no neken'i Japana tamin'ny 2014 araka ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny Guardian izay miparitaka amin'ny haino aman-jery sosialy Japoney amin'izao fotoana izao.
Ary koa, araka ny lahatsoratry ny Guardian :
Amin'ireo Siriana 60 efa any Japana izay mangataka hanana satan'ny mpitsoa-ponenana, telo no efa nahazo, ary nomena alàlana hipetraka maharitra noho ny antony maha-olona ny 30 hafa.
Nolazain'i Hiroaki Ishii, Tale mpanatanteraky ny Fikambanana Japoney misahana ireo mpitsoa-ponenana hoe “firenena mikatona” ho an'ny mpitsoa-ponenana i Japana tamin'ny resadresaka tao amin'ny gazety Mainchi :
“Raha jerena ny tohana ara-bola ho an'ireo mpitsoa-ponenana amin'izao fotoana izao, tsy maintsy lazaina fa tsy miraharaha ireo mpitsoa-ponenana i Japana. Miantso ny governemanta Japoney izahay mba hilefitra noho ny amin'ny maha-olona” hoy i Hirokaki Ishii, tale mpanatanteraky ny Fikambanana Japoney Misahana ireo Mpitsoa-ponenana .
Ny sasany kosa nanamarika ny fomba hahatonga io resaka io ho olana any aoriana any. Nobuto Nosaka , izay, amin'ny maha-Ben'ny Tananan'i Setagaya ao Tokyo mahafantatra tsara ny tena hevitry ny olona tsotra, dia nanipika izany fanomezana endrika izany tao anatin'ny bitsika iray mifandrohy aminà lahatsoratra iray ho an'i Huffington Post Japan :
‘ Krizin'ny mpitsoa-ponenana Eoropeana” no ilazan'ny any Japana ilay olana na dia mangataka ny hialokaloka any aza ireo Siriana. Heverina ho toy ny olan'ny hafa ity krizy amin'ny maha-olona ity.
Nolazain'i Nosaka amin'ny lahatsoratra iray hafa ho an'ny HuffPo fa tsy maintsy mitombina tsara ny valintenin'i Japana amin'ny ” loza” miseho any Syria amin'izao fotoana izao.
Nomarihany ihany koa fa fara-faharatsiny ny fihetsik'i Japana amin'ny fanekena ( na ny marimarina kokoa amin'ny fandàvana) ireo mpitsoa-ponenana dia toy ny tamin'ny fotoanan'ny “boat people”-n'i Vietnam (olona niondrana an-tsambon'i Vietnam) tamin'ny faran'ny taona 1970. Tamin'izany fotoana izany, araka ny filazan'i Nosaka dia nandray anjara tamin'ny famatsiambola sy ny fahaizamanao i Japana ho fanampiana tamin'ny fananganana toby tany Indonezia ho an'ireo mpitsoa-ponenana nandositra an'i Vietnam sady nanome fitaovana ihany koa hanabeazana sy hametrahana ireo olona ireo any amin'ny firenena hafa.
Na izany aza, tahaka ny amin'izao fotoana izao dia ” firenena nikatona” ho an'ny mpitsoa-ponenana i Japana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/09/17/74439/
 araka ny voalaza ao amin'ny The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2015/sep/09/japan-takes-no-syrian-r
 Lalàna momba ny Fandriampahalemana sy ny Fiarovana : https://globalvoicesonline.org/2015/09/01/japans-push-to-renew-military-operations-has-sparked-mass-nationwide-protests/
 Organisation for Economic Co-operation and Development (Fikambanana ho fiaraha-miasa ara-toekarena sy fampandrosoana). : http://www.oecd.org/about/
 Martsa 2015 fa : : http://www.economist.com/news/asia/21646255-worlds-refugee-problem-grows-japan-pulls-up-drawbridge-no-entry
 lahatsoratry ny : http://www.theguardian.com/world/2015/sep/09/japan-takes-no-syrian-refugees-yet-despite-giving-200m-to-help-fight-isis
 Fikambanana Japoney misahana ireo mpitsoa-ponenana : https://www.refugee.or.jp/en/
 amin'ny lahatsoratra iray hafa ho an'ny HuffPo : http://www.huffingtonpost.jp/nobuto-hosaka/syria-refugee_b_8103822.html
 “boat people”-n'i Vietnam (olona niondrana an-tsambon'i Vietnam) : http://articles.chicagotribune.com/1989-09-10/news/8901110814_1_vietnamese-boat-people-refugee-japanese-ministry